Rita, Writing for My Sake!: September 2009
(ရန်ကုန်ကို ပထမဆုံး ရောက်ဖူးတဲ့ အညာသူ)
မူကြိုကျောင်းသူ ဘ၀ပဲ ရှိသေးတယ်။
အဘိုးအဘွားတွေနဲ့ အတူတူ၊ ဘွားဘွားရဲ့ မွေးစားသမီးပါတယ်.. ကိုယ့်ကို ထိန်းဖို့။
အသက် ၄ နှစ်လောက်မှာ မိဘတွေ မပါဘဲ ပထမဆုံး ခရီးထွက်ဖူးတာ။
တည်းတဲ့အိမ်မှာ မြို့ကရောက်နေတဲ့ အသိတစ်ယောက်က လာတွေ့ပြီးတော့ ပြောတယ်။
သူ ပြန်တော့မှာ တဲ့။ မေမေ့ဆီကို စာရေးပေးလိုက်ဦးမလား တဲ့။
ဘွားဘွားကလည်း ရေးလိုက်လေ လို့ပြောတယ်။
ကိုယ်ကလည်း မငြင်းဘူးပဲ။ အင်း ရေးမယ် ဆိုပြီး စာရွက်နဲ့ ဘော့ပင်ယူပြီး ရေးတော့တာ။
ဘာမှလည်း တတ်တာ မဟုတ်ဘူး။
"၀လုံး" လောက်ကလွဲပြီး ဘာမှ မရေးတတ်သေးတဲ့ အချိန်။
အဲဒါကို "၀လုံး" ပဲတတ်လို့ "၀လုံး" ပဲ ရေးလိုက်တယ် မထင်နဲ့။
လူကြီးတွေ စာရေးသလို တွန့်တွန့်တွန့်တွန့် တွေနဲ့ ကကြီးတွေ ဗျိုင်းပျံသလို ရေးထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။
အမယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ အဲဒီတုန်းက အဟုတ်ပဲ မှတ်နေတာ။ ငါကွ ဆိုပြီး...
အဲဒါကို အဲဒီ အသိအန်တီကလည်း တကယ်ယူသွားပြီးတော့ မေမေ့ဆီ တကယ်ပေးလိုက်တယ်။ ကိုယ်လည်း ခရီးသွားရာက ပြန်ရောက်ရော မေမေက ကိုယ်ရေးထားတဲ့ တွန့်တွန့်တွန့်တွန့် စာတွေကို ပြပြီး...
"ကဲ သမီးရေးထားတာ မေမေ့ကို ဖတ်ပြစမ်းပါဦး" လို့ ပြောတော့ ဟီးဟီးဟားဟားနဲ့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာ မှတ်မိတယ်။
"အလျှံညီးညီး တောက်မည့်မီးကား" ဆိုသလိုပဲ။
ဒါနဲ့ ကြီးလာတော့ စာမေးပွဲတွေမှာ ဘာမေးမေး ဖြေလိုက်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ၀န်မလေးဘူး။
မသိတာ မေးလဲ ရမ်းသမ်းပြီး ရေးထည့်လိုက်တာပဲ။
Posted by Rita at 9/29/2009 10:51:00 PM 22 comments Links to this post
Posted by Rita at 9/27/2009 02:47:00 PM 21 comments Links to this post
Posted by Rita at 9/25/2009 11:17:00 PM 17 comments Links to this post
Posted by Rita at 9/21/2009 10:40:00 PM 22 comments Links to this post
တို့တော့ ငယ်ငယ်လေးတည်းက ချစ်စရာကောင်းပါ့။
(သူများလို မိုက်ကြည့် မကြည့်တတ်ပါဘူး။)
မပန်းနွယ်ရဲ့ post လေးတစ်ခု ဖတ်ရတုန်းက သဘောကျလွန်းလို့ ရယ်လိုက်ရတာ။
မိဘတွေက ကလေးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတင်တာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ရေးထားတဲ့ post လေးပါပဲ။
သူပြောတာလေးတွေ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တွေပါ။
မေစီ။ ။မဟုတ်သေးဘူး..မဟုတ်သေးဘူး။ ဘေဘီပြောတာ မှန်တယ်။ ငါလဲ စဉ်းစားတယ်။ တစ်နေ့.. ငါ ဟီလာရီကလင်တန်လို... သမ္မတအဖြစ် ၀င်အရွေးခံဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်၊ ငါ့ပြိုင်ဘက် ပါတီက ဒီပုံတွေနဲ့ တီဗွီမှာ ဟာသလုပ်ရင် ငါ မဲရပါ့မလားလို့။ ငါ့အဖေကလည်း အင်တာနက်မှာ ငါ အီတာလီယံခေါက်ဆွဲ စားနေတဲ့ ပုံတွေ တင်ထားတယ်လေ။ ငါမှ သေချာမ စားတတ်သေးတာ၊ ပေပွနေတာပေ့ါဟယ်။ သမ္မတလောင်းတစ်ယောက်ဟာ အဲဒီလို ပေပွနေအောင် စားဖို့ မသင့်ဘူး မဟုတ်လား။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မှာ ဒီတသက် သမ္မတဖြစ်ဖို့ လမ်းက မရှိလောက်တော့ပါဘူး။
လွန်ရော ကျွံရော ဖြစ်လှမှ သမ္မတကတော်လောက်ပဲဆိုတော့ သိပ်အရေးမကြီးဘူး ထင်တာပါပဲ။
Posted by Rita at 9/21/2009 01:34:00 AM 22 comments Links to this post
Posted by Rita at 9/19/2009 08:59:00 PM 20 comments Links to this post
comment တစ်ခု ရေးမိရာက ပို့စ် ဖြစ်အောင် ရေးဦးမှပဲလို့ စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။
မောင်သစ်ဆင်း ၀တ္ထုတိုတွေ ဖတ်ဖြစ်တာ အလယ်တန်းလောက်ကပါ။
ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာ့ ၀တ္ထုတိုတွေ တော်တော်များများ ပါခဲ့ပါတယ်။
ဆရာ့ဝတ္ထုတွေက တင်ပြပုံ၊ အကြောင်းအရာ၊ စကားလုံး အားလုံး ညီညွတ်ကောင်းမွန်တဲ့ ၀တ္ထုတွေပါ။ ၀တ္ထုတို လို့ စဉ်းစားမိရင် (အမျိုးသား စာရေးဆရာတွေထဲက) ကိုယ့်ခေါင်းထဲ ဦးဆုံး ပေါ်လာတဲ့ စာရေးဆရာ ၃ ယောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါ...
သူတို့ရေးတဲ့ ၀တ္ထုတိုတွေ ဖတ်ရတဲ့အခါ ထိစေချင်တဲ့ ပစ်မှတ်ကို ထိအောင်ပစ်နိုင်တဲ့ အခင်းအကျင်းနဲ့ အရေးအဖွဲ့မျိုး ဖန်တီးနိုင်တာကို မှတ်မှတ်ထင်ထင်ကို သတိပြုမိစေပါတယ်။
(သူများတွေတော့ မသိဘူး။ ကိုယ်စာဖတ်တဲ့အခါ အမျိုးသမီး စာရေးသူတွေနဲ့ အမျိုးသား စာရေးသူတွေဆီက လိုချင်မျှော်လင့်တဲ့ ပုံစံက မတူပါဘူး။
အမျိုးသားစာရေးဆရာတွေရဲ့စာကို ဖတ်ဖြစ်တဲ့အခါ သူတို့ဆီက ဖွဲ့နွဲ့လွန်းပြီး ရေးထားတာမျိုးကို မလိုချင်မိ မမျှော်လင့်မိဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဆရာ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်ရဲ့စာတွေကို မစွဲလမ်းခဲ့တာ ဖြစ်မယ်။ ဆရာမောင်စိန်ဝင်းရဲ့ ကဗျာတွေ စွဲလမ်းခဲ့ပေမယ့် သူ့ လုံးချင်းဝတ္ထုတွေကို မစွဲလမ်းခဲ့တာ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။)
***ဆရာမောင်သစ်ဆင်းရဲ့ ၀တ္ထုတိုတွေထဲမှာ ပထမဆုံး ဖတ်ဖူးခဲ့တာ "ကျိန်စာ" ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုပါ။
ငှက်ဖျားရောဂါ သုတေသန ဆရာဝန် တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို သူ့ လူမှုဘ၀၊ မိသားစု ဘ၀နဲ့ ရောယှက်ပြီး တင်ပြထားပါတယ်။
ဆေးမကုဘဲ သုတေသနကို ဇောက်ချ လုပ်နေတဲ့ ဆရာဝန် ...
ငှားနေတဲ့အိမ်က ကန်ထရိုက်တိုက် ပြင်ဆောက်တော့မှာမို့ အိမ်ရှင်က ဖယ်ခိုင်းထားတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြဖို့ ဆရာဝန် အိမ်အပြန်ကို စောင့်နေတဲ့ ဇနီးသည်...
သုတေသနမှာ အဆင့်တခု အောင်မြင်ခဲ့လို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အောင်ပွဲခံပြီး ရီဝေေ၀ ပြန်လာတဲ့ ဆရာဝန်...
အဲဒီ အခင်းအကျင်းနဲ့ ၀တ္ထုကို စဖွင့်ထားပါတယ်။
ကိုယ်ငယ်ငယ်က ၀တ္ထုဖတ်ရင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီး ကြည့်ချင်စိတ် ပေါက်လာစေတဲ့ ဒိုင်ယာလော့ဂ်တွေ...
"ဘယ်လိုလဲ ဒေါက်တာ.. ရှင့် မိုက်ကရိုစကုပ်အောက်က ငှက်ဖျားပိုးလေးတွေဆီက ငွေ နှစ်သိန်းလောက် ခဏ ချေးလို့မရဘူးလား"
"မုံရွာပြန်ကြမယ်။ မေမေတို့နဲ့တွဲပြီး ပွဲရုံဖွင့်မယ်"
"ဟေ့ ငါ ဆရာဝန်ကွ"
"ဆရာဝန် ဘာဖြစ်သလဲ။ ရှင် ဆရာဝန်ဆိုရင် တဖက်က ဆေးခန်း ဟန်မပျက်ဖွင့်ပေါ့" လို့ ဇနီးသည်က ပြောတော့...
"ငါ ဆေးကုတဲ့ ဆရာဝန် မဟုတ်ဘူးကွ။ သုတေသန လုပ်တဲ့ ဆရာဝန်။
ဒီမှာ ငါတို့ ဆေးလောကမှာ အဆိုတစ်ခုရှိတယ်။
ဆေးကုသော ဆရာဝန်သည် ကောင်း၏
ပညာပေးသော ဆရာဝန်က ပို၍ ကောင်း၏
သုတေသနလုပ်သော ဆရာဝန်က အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏ တဲ့"
"အော် ဟုတ်လား.. အဲဒီလို ဆရာဝန် အမျိုးမျိုး ရှိမှန်း ကျွန်မ မသိခဲ့လို့ပါရှင်။ အစကသာ သိခဲ့ရင် ကျွန်မဘ၀ ခုလို..."
ပြန်ရေးပြရတာတောင် ဖျက်လို ဖျက်ဆီး လုပ်မိရာ ကျမှာ တကယ်ပဲ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ဆရာဝန် အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း သမီးငယ် ဖျားနေတယ်လို့ ဇနီးက ပြောတော့ နားကြပ်လိုက်ရှာတဲ့ အခန်း။
"ဟိုတလောကတော့ အောက်ဆုံး အံဆွဲထဲမှာ တွေ့မိတယ် ထင်တာပဲ"
သူသာ ဒီဝတ္ထုကို ဖတ်မိရင် ဆေးမကုတဲ့ ဆရာဝန်အကြောင်းရေးရင် နားကြပ်လိုက်ရှာတဲ့ အခန်းမျိုး ပါရမယ် လို့ ပြောချင်စိတ် ပေါက်သွားမှာပဲ။
"ဒီမှာမောင် ကျွန်မနဲ့ မောင် နှစ်ယောက်တည်းဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မ ပါရမီဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ခုဟာက သားသမီးတွေ ရှိနေသေးတယ်။ ကျွန်မတို့ ဘာကိုပဲ လုပ်လုပ် သူတို့အတွက် ဦးစားပေး စဉ်းစားရလိမ့်မယ်။ ခု မောင် လူသားကောင်းကျိုး ဆိုတာကို ပစ်ပြီး မိသားစု ကောင်းကျိုးအတွက်ပဲ ရွေးချယ်ပါစေလို့ ကျွန်မ ငရဲကြီးခံပြီး ဆုတောင်းပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ငရဲကြီးခံချင်ရသလဲ သိလား မောင်
ကျွန်မက မိခင်တယောက် ဖြစ်နေလို့ပေါ့"
နောက်တော့ သူတို့ သုတေသန အောင်မြင်မှု တစ်ခုအတွက် WHO က ပို့လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ရှေ့မှာ သူတီးတိုး ရေရွတ်တဲ့ စကား...
"တကယ်တမ်း အဆုံးရှုံး အစွန့်လွှတ် မခံနိုင်ဘဲနဲ့ ဘာကိုမှ မစွန့်စားပါလေနဲ့"
နောက်တခန်းက ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး ပြန်လာတဲ့ သားငယ်နဲ့ စကားပြောခန်း...
"ကောင်လေး ၃ ယောက်နဲ့ နာဇီတွေ ချတဲ့ကား ဖေဖေရ"
"ဟင့်အင်း ကောင်လေး ၂ ယောက် သေသွားတယ်။ သူတို့ထဲ တစ်ယောက်က သစ္စာဖောက်လိုက်လို့လေ။ သူက သစ္စာဖောက်တာပေါ့။ သူ့မှာ မိန်းမနဲ့ ကလေးရသွားတာကိုး။ နောက်ဆုံးခန်းမှာ ကောင်လေး ၂ ယောက် ပိတ်မိနေတဲ့ အခန်းထဲကို လည်ပင်းထိအောင် ရေဖြည့်ပြီး အပြင်က သစ္စာဖောက်က လက်နက်ချဖို့ အော်ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်က တစ်ယောက် နားထင်ကို တစ်ယောက် သေနတ်နဲ့ တေ့ပြီး တစ် နှစ် သုံး ဆို... အဲဒီ သေနတ်သံကို ကြားတဲ့ အချိန် သစ္စာဖောက်ရဲ့ မျက်နှာကြီးဟာ..."
နောက်တခန်းက ကဗျာစာမူခထုတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ပြန်လာတဲ့ သားကြီးနဲ့ စကားပြောတွေ...
"ဖေဖေက သားကို ကဗျာဆရာကို မဖြစ်စေချင်တာ"
"ဒါဖြင့် ဖေဖေက သားကို ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲ"
"ဖေဖေက သားကို သာမန်လူပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ စီးပွားရှာ.. အိမ်ထောင်ပြု.. စီးပွားပိုပိုရှာ.. အချိန်တန်တော့ အသာကလေး သေသွား။ ဒီလို ဘ၀မျိုးက side effect နည်းတယ်။"
"မစိမ်းပင်ရဲ့ ကဗျာ တစ်ပုဒ် ရှိတယ် ဖေဖေရဲ့
တဲ့။ သားက အတ္တကို အနာဂတ် ပို့ထားချင်တာ။"
"သားထင်လို့ပါ။ ဖေဖေလဲ ဒီလို ထင်ခဲ့တာပဲ"
"ဒါဖြင့် ဖေဖေ သားတို့လို ငယ်ခဲ့ဖူးသလား"
"ဖေဖေ သားတို့လို ငယ်ခဲ့ဖူးသလား"
နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီ ဆရာဝန် WHO က ပို့ထားတဲ့ မှန်ဘောင်သွင်း စာရွက်ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးခွဲပစ်လိုက်တယ်။
ကြည်အေး နောက်ဆုံးရေးတဲ့ "အိမ်ဖြူလင်းသစ်" ထဲမှာ ကိုညိုထွန်းပြောတဲ့ "အိမ်ထောင်ပြု သားသမီးတွေ ပွားစီးပြီးမှတော့ Gauguin လို တဟီတီ သွားပြီး ပန်းချီဆွဲချင်လို့ မရဘူး" ဆိုတာ ဖတ်ရတော့လည်း ခုပြောတဲ့ "ကျိန်စာ" ၀တ္ထုကို သတိရနေမိသေးတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် အရင်းအတိုင်း ရိုက်တင်ပေးပြီး မဖတ်ရသေးတဲ့ သူတွေ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
အိမ်မှာတော့ မောင်သစ်ဆင်းရဲ့ ၀တ္ထုတို စာအုပ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မယူလာမိဘူး။
မှတ်မိသမျှ တင်ပေးတော့ မူရင်းလို အရသာ ရှိမယ် မထင်ဘူး။
ဒီဝတ္ထုကို ဖတ်မိရင် စာရေးဆရာကို ဆရာဝန် လို့ ထင်သွားနိုင်လောက်ပေမယ့် ဆရာ မောင်သစ်ဆင်း က ဆရာဝန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မန္တလေး တိုင်းရင်းဆေး သင်တန်းဆင်း တစ်ယောက်လို့ ထင်မိပါတယ်။
၁၀ တန်းအောင်ပြီး နောက်တော့ ကိုယ်က မဂ္ဂဇင်းတွေလဲ သိပ်မဖတ်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဆရာလဲ စာသိပ်မရေးတော့ဘူး ထင်တာပါပဲ။ သင့်ဘ၀မှာ အယ်ဒီတာ လုပ်ပြီး ဆောင်းပါးတွေတော့ ရေးနေခဲ့တယ်။ "ထူးဖေသစ်" ဆိုတာ ဆရာ့ ကလောင်ခွဲလို့ မှတ်ထားမိသလိုလို.. သိပ်တော့ မသေချာပါ။
(မမချို သိရင် ပြင်ပေးပါ။)
ကိုယ် ဘလော့တွေ လိုက်ဖတ်ကာစ 2009 အစလောက်က မောင်သစ်ဆင်း နာမည်နဲ့ ဘလော့တစ်ခုတွေ့တော့ ဘာမှ မကြည့်ဘဲ ၀မ်းသာအားရ cbox မှာ သွားမေးမိတယ်။ ပြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဆရာ မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲလား။ အပြင်မှာလားတောင် မသိပါဘူး။ ဘလော့တစ်ခုလုပ်ပြီး စာတွေရေးရင် ကောင်းမှာလို့ တွေးမိတယ်။
ဆရာ့ရဲ့ "တရား"၊ "လေးသည်တော်"၊"လူနှစ်ယောက်၊ ကျားတစ်ကောင်နှင့် တောင်တန်းများ" တို့လည်း ကိုယ် မှတ်မှတ်ထင်ထင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စာတွေပါပဲ။
အဲဒီ သုံးပုဒ်လဲ ဟန်သစ်မှာပဲ။
မဟေသီမှာ ဟိန်းလတ်က အင်တာဗျူးတော့.. "ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး ရေးကြည့်မိတာပါပဲ။ ရေးပြီးတော့ ကိုယ်လို ဖတ်ချင်တဲ့သူ ရှိရင် ဖတ်ရအောင် မဂ္ဂဇင်းကို ပို့တာပါ။ အဲ.. အယ်ဒီတာက ရွေးခဲ့ရင်ပေါ့လေ။" လို့ ဖြေခဲ့တာတောင် သတိရနေမိသေးတယ်။
၀တ္ထုတိုတွေ ဘယ်လောက်ကြိုက်လဲ ကိုယ်ကတော့ ဘယ်တော့မှ ၀တ္ထုတို ရေးလို့ရမယ့် လက် ဖြစ်မယ် မဟုတ်ဘူး။
လွမ်းလိုက်တာ အဲဒီလို ၀တ္ထုတိုတွေ။
Posted by Rita at 9/14/2009 11:49:00 PM 11 comments Links to this post
Labels: book, Mg Thit Sinn
ဒီအတိုင်း ပြောင်းလို့ မရပါဘူးလို့ ငါရေးထားတဲ့ဟာကို လုပ်ချင်တာကိုး
မိန်းမဆို မသနားတတ်ဘူး။ တူနဲ့ နှစ်ချက်လောက်သာ ထုချင်တော့တယ်။ ဒါပဲ။
Nyan: ha ha
me: မ ဂဒီးပါဘူး
Nyan: relax, if you angry, your life will be shortened
and your face will be uglier
11:14 PM me: ယောက်ျားတွေဟာ အဲလို စကားကြီး စကားကျယ်တွေ ပြောရင်ပြော ဒါမှမဟုတ် လိုက်ကြောင်နေကြတော့တာပဲ
girl always think like that
11:15 PM they don't understand the uncertainty of life and want to be granted
but in real life, nothing is granted
11:16 PM me: တော်ပြီ ငါအိပ်တော့မယ်
Nyan: sweet dream
me: ဒီနေ့ philips headset ၀ယ်လာတယ်
Nyan: how is it?
me: philips ဆိုတော့ ကောင်းတာပဲ
Nyan: clear sound?
Nyan: i want this
me: ပထမတော့ ဈေးနဲတာ ရှာနေတာ
11:17 PM Nyan: where did you buy?
me: ၃၀ လောက်တွေ
Nyan: yes, your decision is correct
girls like to hear that
me: နောက် philips တွေ့တော့
Nyan: ok ok
11:18 PM i really appreciate what you decide
quality can't buy
cheap thing is cheap quality
me: နင့်ကို ငါက appreciate လုပ်စေချင်လို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး
me: ဈေးများလို့ ပြေရာပြေကြောင်းပြောနေတာ
Nyan: it's ok to buy quality item
11:19 PM i won't choose cheaper with lower quality
me: ၅ သောင်းလောက်လို့ စဉ်းစားမိရင် ဒီည အိပ်ပျော်ပါ့မလား မသိဘူး
ကဲကဲ ဒါပဲ အိပ်တော့မယ်
11:20 PM Nyan: haveasweet dream!
me: ယောက်ျားတွေ ဘယ်လိုကြောင်တတ်တယ် ဆိုတာ ငါပြောပြတော့မယ်
Nyan: take it easy
guy are guys
you won't understand them
you can understand only one guy
me: အေးပါ ဟုတ်မှာပါ
11:21 PM အမ်
ဘယ် one guy လဲ
Nyan: that will be your husband and you'll understand him when you grew old
Nyan: That's what i seen from my parents
me: ဟားဟားဟား really?
Nyan: but until now, they can't understand each other 100%
11:22 PM just getting alone with 90% understanding
me: အကုန်နားလည်ရင် ချစ်လို့ရတော့မယ် မထင်ဘူး
me: နားမလည်တာလေး ကျန်နေတာ ကောင်းတာပေါ့
Nyan: they'll be really one from two
11:23 PM no excitement
love need some excitement
me: good words
ဆားချက်တယ် လို့ ပြောမယ်ဆိုလဲ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီတိုင်းထားလိုက်ရင် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နဲ့မို့ ဘလော့ပေါ်ကို အမှတ်တရ တင်မိတာ။
cbox က chatting တွေ တင်တာလဲ အဲဒါကြောင့်ပါပဲ။
ပထမ တစ်ခုက email ပါ။
သူ့ကိုဆို ချစ်တဲ့လူတွေက တော်တော်ချစ်ကြခင်ကြပြီး၊
မုန်းတဲ့လူတွေကလည်း တွေ့ရာ သင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်း ဆိုလောက်အောင်ပဲ။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ နည်းနည်းကလေးသာ ရှိတဲ့ ချစ်ခင်ရတဲ့ သူတွေထဲမှာ သူကတော့ တစ်ယောက်အပါအ၀င်ပါပဲ။
ဟိုတနေ့က အွန်လိုင်းမှာ ဟိုဟာလျှောက်လုပ်၊ ဒီဟာလျှောက်လုပ် လုပ်ရင်း err တွေ ဖြစ်လာတော့ သူ့ကိုလည်း အွန်လိုင်းမှာ မတွေ့တာနဲ့ (အိပ်ခါလဲ နီးပြီဆိုတော့) email ပို့ထားလိုက်တာ။
(ကိုယ့် အကျင့်တစ်ခုက အွန်လိုင်းမှာ err တစ်ခု ဖြစ်ပြီတဲ့ ဆိုရင် အကူအညီတောင်းရမယ့် သူတွေဆီကို ဘ၀ပျက်မလို စာရေးပြီး ပို့တတ်တယ်)
မနက်ကျတော့ အဲဒီစာ ရောက်နေတယ်...။
နောက်တစ်ခုက.. တမေဂျာတည်း၊ တတန်းတည်း၊ တကျောင်းတည်း သူငယ်ချင်း ဉာဏ်ထွန်းနဲ့ chatting လုပ်ထားတာ။
Philips Headset ၀ယ်တဲ့နေ့ကပေါ့။
တခုခုဆို သူမပါရင် မပြီးဘူး။
(ရုံးမှာ လစာတိုးတာကစ၊ ဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းလို့ ATM မှာ register လုပ်တာ အလယ်၊ ရီးစားနဲ့ စိတ်ကောက်ကြတာ အဆုံး) လှမ်း ပြောလိုက်ရမှ စိတ်ထဲ နေလို့ ရတယ်။
အဲဒီနေ့က Funan မှာ Philips ကိုပဲ ဘာမှ သိပ်စဉ်းစား မနေဘဲ ၀ယ်လာတာ။
ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ online မှာ တွေ့တော့ ဈေးကြီးတဲ့ အကြောင်းလေးကိုတော့ ပြောလိုက်ချင်သေးတာနဲ့။
လာမယ့် အပတ် IT Show ကိုလည်း အတူ သွားဖို့ date ထားကြသေးတယ်။
လူလယ်ကောင်မှာ ငြင်းရင်း ခုန်ရင်း ထသတ်မိကြဦးမလား မသိဘူး။
စစချင်းတော့ နှုတ်ခမ်းစူမိစေတဲ့ စကားလုံးတွေပေါ့လေ။
နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ရယ်ချင်လာမိတယ်။
စဉ်းစားမိတိုင်း အသံထွက်ပြီးတော့တောင် ရယ်နေမိတဲ့ စကားလုံးတွေပါပဲ။
သူတို့ကို ပိုပြီးတော့လည်း ချစ်လာပါတယ်။
Posted by Rita at 9/08/2009 11:09:00 PM 10 comments Links to this post
Labels: Friend, remembrance, This and That
Posted by Rita at 9/06/2009 09:33:00 PM6comments Links to this post
(ဒီနေ့မနက် စာတိုက်မှာ သွားရွေးလာတဲ့ "လေရူးသုန်သုန်" စာအုပ်)
(ဒီနေ့ညနေ Funan က အပြန်)
ဒီနေ့ ခြေတိုတဲ့နေ့။ နေကလည်း ပူလိုက်တာ ဆိုတာ။
Funan အပေါ်ဆုံးထပ်ကနေ Philips Headset ၀ယ်လာပြီး ကျန်တာတွေက အောက်ဆုံးထပ်ကနေ ၀ယ်လာတာ။
Sembawang DVD ဆိုင်ကနေ (ဘာမှ မ၀ယ်ဘဲ) အထွက် အပေါက်မှားထွက်မိလို့...
(ဟယ် ငါ ဒီလှေကားမျိုး မဆင်းဖူးပါဘူး ထင်နေတာ။ မော့ကြည့်လိုက်တော့မှ နောက်ပေါက်ဖြစ်နေတာကိုး)
အဲဒါနဲ့ အထဲပြန်ဝင်ပြီး နောက်တပတ် ပတ်လိုက်တာ ကျန်တဲ့ ၄ မျိုး ပါလာတာပဲ။
ဒါတောင် laptop တင်တဲ့ စားပွဲနဲ့ scanner မ၀ယ်ရသေးဘူး။
ဒီ weekends တော့ ၀ယ်ဖြစ်အောင် ၀ယ်မယ် စိတ်ကူးတာပဲ။
scanner ၀ယ်ဖို့ ဆရာသမားတစ်ယောက်ကို ပင့်ရဦးမယ်။
(ငါ့နှယ်နော်.. အင်ဂျင်နီယာ မဟုတ်သလိုပဲ..
အေးလေ.. ဟုတ်မှ မဟုတ်တာ)
ရုပ်ရှင်လေး ဘာလေးတော့ ကြည့်ဦးမှလို့ စိတ်ကူးမိတာ ရွာသားတို့၊ ပုလုတို့၊ သပသ တို့ post တွေ ဖတ်မိလိုက်တိုင်းပါပဲ။ ဒါနဲ့ အခွေဆိုင် ပတ်တာ၊ သူတို့ ရေးဖူးတဲ့ ကားတွေ စဉ်းစားတော့ တစ်ခုမှ မမှတ်မိဘူး။ အိမ်ရောက်မှ ပေါ်လာတယ်။ လီဆာ ဆိုလား ဘာလား။
သူတို့နဲ့ တွေ့ရင်ကောင်းမှာလို့တောင် တ မိသေးတယ် :)
ဘာကြည့်ရင် ကောင်းမလဲ မေးချင်လို့။ (တွေ့တော့ သိမှာကျနေတာပဲ)
Notting Hill လဲ မတွေ့။ Pretty Woman လဲ မတွေ့။
Shawshank Redemption လဲ မတွေ့။ Schindler's List လဲ မတွေ့။
The Driver လဲ မတွေ့။ (ရှိရင်ရှိမှာပါ။ ကိုယ် မမြင်တာ ဖြစ်မယ်)
(တွေ့လို့ ၀ယ်လာပြီး ကြည့်လဲ အဲဒါတွေ နားလည်ချင်မှ နားလည်မှာပါ။
တခန်းတောင် မပြီးခင် အိပ်ငိုက်လာနိုင်တယ်။
Shawshank Redemption ကတော့ ဂျူး ရဲ့ ရုပ်ရှင် ခံစားမှု ဆောင်းပါးကို အထပ်ထပ် ဖတ်ခဲ့ဖူးတော့ မှတ်မိနေတယ်။ Schindler's List ကတော့ လွယ်အောင် ပြန်ရေးထားတဲ့ စာအုပ် ဖတ်ဖူးတယ်။
ပါလက်စတိုင်း အကြောင်း ဖတ်ပြီးကတည်းက ဖတ်ချင် ကြည့်ချင်နေခဲ့တာ။)
နောက်တော့ Addy တခါပြောဖူးတဲ့ Note Book နဲ့ Baldwin Library ကနေ စာအုပ် ငှားဖတ်ခဲ့ ဖူးတဲ့ Jurassic Park ပဲ ၀ယ်လာပါတယ်။ တကယ်က Harry Potter တို့၊ Spider Man တို့ လောက်ပဲ ကြည့်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတာ။ :D
Hary Potter ကို Goblet of Fire တွေ့တယ်။ ကြည့်ပြီးသားလဲ မကြည့်ရသေးလား မသေချာတာနဲ့ မ၀ယ်ခဲ့တော့ဘူး။ ဒင်းကလည်း စာဖတ်ပြီး ကြည့်မှ နားလည်တာ။ သူ့ကိုလည်း ရှေ့သုံးအုပ်နဲ့ နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းတစ်အုပ်က လွဲလို့ မဖတ်ရသေးဘူး။
J K Rolling အကြောင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဆွေးနွေးဖူးတာ အမှတ်ရမိသေးတယ်။
"ဒီမိန်းမနော်.. မိန်းမဖြစ်ပြီး တော်တော်ကို ရေးတတ်တယ်" တဲ့။
"မိန်းမဖြစ်နေလို့ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေ အဲဒီလို ထုတ်ပြီး ရေးနိုင်တာပေါ့" လို့။
Jurassic Park ကတော့ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ နဲနဲ ကိုက်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဘလော့ဂါ ဖြစ်ရတာ ကျေနပ်မိပါတယ်။
သံရုံးမှာ မမသီတာ နဲ့ တွေ့တုန်းက တစ်ခါ၊
ဖေဖေ့ကိစ္စ ဖြစ်တုန်းက ဘလော့မှာ လာအားပေးကြတုန်းက တစ်ခါ၊
ပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သီချင်းတွေ ရှာပို့ကြတဲ့ အကြိမ်ကြိမ်တွေမှာ၊
ကိုယ် လိုချင်နေတဲ့ "လေရူးသုန်သုန်" စာအုပ်ရတော့ တစ်ခါ...
အဲဒီအခါတွေမှာကတော့ အထူးသဖြင့် ဂုဏ်ယူကျေနပ်မိပါတယ်။
Posted by Rita at 9/03/2009 10:05:00 PM 13 comments Links to this post